October 13, 2021 Farah Abdulkadir Mohamed 6
MUQDISHO(P-TIMES) – Madaxweynihii hore ee Maxkamadda ICJ Garsoore Cabdi qawi Yuusuf Axmad oo kasoo jeeda Soomaaliya ayaa soo saaray go’aan ugaar ah maadaama ay jireen arimo uu kaga aragti duwanaa Garsoorayaasha.
Sida ay jideenayaan Qodobka 57-aad ee lagu dhisay Maxkamadda iyo Q. 96/2-aad ee Xeer-hoosaadka Maxkamadda 1978 soo baxay, waxaa u banana Garsooraha in uu aragtidiisa si gaar ah usoo saaro hadii uusan ku qancin go’aanka.
Garsoore C/qawi ayaa ku raacay maxkamadda diidmada sheegashada Kenya ee ah in iyada iyo Soomaaliya ay lahaan jireen xaduud badeed lagu cabirey loo raacay cabiridiisa loolka is bar-bar socda.
Sidoo kale waxuu ku raacsanyahay Maxkamadda diidmada ay diiday dalabka Kenya ee ah in la Maxkamadda ay ku cabirto xadka labada dal cabirka loolka is bar-bar socda taas oo ay Kenya u aragtay in lagu gaari karo cadaalad.
Mr, C/qawi waxuu u arkaa Maxkamadda in ay raacday xariiqa toosan ee lagu cabiro badaha marka ay xadeynaysay Biyaha qaranka, aaga dhaqaalaha iyo qol-foof-qaaradeedka intaba, taas oo uu ku tilmaamay mid waafaqsan Q. 15-aad ee Heshiiska Caalamiga Ah ee UNCLOSE, hanaanka saddexda heer ee ay Maxkamadda u isticmaasho xadaynta iyo tubta toosan ee Maxkamadda balse waxa uu sheegay in uu ka gows-haysto habka doorashada tiirarka El-elada ah taas oo uu ku sheegay mid aan waafaqsanayn Xeerka badaha iyo fiqhiga qaanuunka.
Si fiican buu garyaqaanku u dul istaagay!
Waar badda Kenya loo xukumay hay noo danbaysa e, waxaa qoraalkiisa ku jira in labada waddan madaxa laysu geliyey, oo arrin aan bislayn ay meesha ku jidho! Waxa aan maqli jiray ‘waar hadalka ha ii dhuubin’. In wax la isu hoosgaliyey baa halkaa ka muuqata, Soomaaliduna meel cidla ah bay ka BURAANBUDHAY sida muuqata.
@Aar. Waan kugu raacsanahay sida Aad wax u bayaamisay. Waa runtaa, waxay ahayd in ICJ laga hadlo 12miles ka ay Kenya siisay ICJ. Madaxda, siyaasiyiinta, wax garad Iyo Somali idayl keed ba, maysan hadlin. Fadlan Waa in la ga hadlo in Kenya loo xugmay waxaysan lahayn. ICJ, hal kaas Kenya bay u hiilisay. Ayadaana wali dood sii qabta.
Meel dhow & xukun baad ka hadlaysaan, waxaa muuqata in aysan Kenya rabin in ay Kismaanyo & jubbooyinka ka baxdo! Itoobiyana, Allaa isku diraye, waa horay nala wareegi lahayd. Iyada oo MARAAKIIB DAGAAL soo iibsatay buu Alle isku jeediyey. Laakiin labo ayaan is qabanayn, in uu qabiil walba CALAN samaysto oo uu DAWLAD sheegto oo uu MADAXWEYNE samaysto & in aynu qarnimo & Soomaalinimo ka hadalno; qabyaalad & qaranimo isku meel ma galaan.
Isku soo wada xoori, Kenya waxaa badda loogu xukumay, kaddib markii shaashadaha caalamka laga daawaday ra’iisal wasaarihii oo macawiso xirxiraya oo DHIILO xanbaarsan & AMXED-ISLAAM oo aanba hawlahan ku jirin oo kolba madaxtooyada Nayroobi looga yeerayo & Saciid-Deni oo Sawaaxili u eg oo hadba dhinac u gurguuranaya, MARKAAS bay maxkamaddu go’aankan gaadhay. Badda loo jaray waxaa ka khatarsan, sida uu markhaatiga nooli sheegay, miinada kale ee go’aanka lagu soo dhex aasay. Dastuurkii Soomaaliya oo kale baa laga dhigay xukunka maxkamadda. War kalana waa sugaynaa haddii alle idmo.
MAANSHAALLAAAHO .. Wiikaas dhaladka ah, ee geesiga ah, hadii uu noo joogin lahayn ICJ, waxaa laga yaabi lahaa in badda SOOMAALI WEYN la dhici laha.
HAAWEYDA HAWIYE, iyaga waxoodo waxaa weeyee, maxaan taabta, maxaan cunaa, maxaan dilaa, maxaan kufsada..
abdiqawi garsoorah somalia guul Allah ku siiyo aad ayaad somalida ugu hiilisay intii awoodaada ah laakiin waxaan layaabay ini cabdrashiid waxa looxusi waayey waxaan dhegeestay ninkii somaliya maxkamada somalidu a. daahir oo yidhi nimaakaa tiraadeen bad beey gateen anigu madaliya dahaba ayaan siinlaha xalay odagii barlamaanka aqalka sare wuxuu yidhi wilkeegiyo abdishakuuro cafs ayaan ku weediisteey dembii baa kaa galynay